Joba fonenana any Dubai ho an'ny Indiana - Miaraha amin'ny ekipanay!
Joba fonenana any Dubai ho an'ny indiana
Mifampiarahaba amin'ny tenim-pirenena hafa aho!
Dubaj Zjednoczone Emirati Arabskie Ho an'ny raj podatkowy!
navoakan'ny Dubai City Company at Novambra 13, 2018
Job vacancy tao Dubai ho an'ny Indian amin'ny Dubai City Company. Ny toro-hevitra momba ny asa dia manampy ireo mpikaroka amin'ny asa Indiana. Ny tanjonay dia ny hanampy azy ireo hahatratra ny tsenan'ny asa. Dubai City Company nametraka am-pahombiazana ireo mpikaroka an'arivony maro. Ary haintsika ny fomba hanampiana azy ireo. Indrindra ny fomba famindram-pon'ny any Arabo Mitambatra Emirates. Banga ho an'ny asa any Dubai na Abu Dhabi. Misokatra be ho an'ny mpanatanteraka Indiana sy mpianatra nahazo diplaoma vaovao. Noho izany, na inona na inona traikefa anananao. Ianao dia afaka mangataka asa ao amin'ny Emirates.
Ary tena azo atao, azonao atao ny momba azy ekipa manam-pahaizana manokana. Ary ny HR mpitantana dia hitarika anao amin'ny asa any ivelany. Ka ny hany mampanahy anao ihany no maninona, nahoana aho no tsy nahita ity tranokala ity taloha ?. Noho izany, amin'ny ankapobeny dia andramo Mahazoa izay azonao atao avy amin'ny tranokalanay. Ary ao an-tsaina, ao an-tsaina io bilaogy. Avy eo, ampiharo amin'ny lisitry ny mpikirakira vaovao vaovao sy ny vavahadin'ny mpiasa. Ary manana fanantenana isika dia hahita lahatsoratra liana sy marisika ianao.
Ka raha tadiavina ianao ho an'ny asa iray any Dubai ho toy ny olona Indiana, tokony hosoratanao amin'ny tranokalanay ny mombamomba anao. Avy eo dia mitadiava olona marobe hifandraisana sy hiresaka aminy momba ny Emirà Arabo Mitambatra. Amin'ny ankapobeny, ny fomba tsara indrindra amin'ny maha-olona indianina azy dia ny mifandray amin'ny Indiana hafa. Ary hanampy anao hahatratra fahombiazana lehibe izany ny traikefa niainanao.
Kitiho ny sary hanombohana ny Company Dubai
Orinasa Dubai ankehitriny manome torolàlana tsara & sombin-tsarimihetsika tsara ho an'ny asa any Dubai. Ny ekipanay dia nanapa-kevitra ny hampakatra vaovao ho an'ny fiteny tsirairay ho antsika Dubai mitsotra. Noho izany, ao an-tsaina, dia afaka mahazo mpitarika ianao, toro-hevitra ary asa any amin'ny Emira Arabo Mitambatra amin'ny fiteninao.